Ny fijerena manaitra ny sarin'i Faiza Maghni | Famoronana an-tserasera
Ilay mpanakanto Faiza Magni teraka tany Oran, Algeria, dia mpanao hosodoko nampiana-tena talanjona amin'ny zavakanto foko, sary bitika persiana ary sary hosodoko ankehitriny, manintona aingam-panahy avy amin'izy ireo izy hamorona ny sangan'asany. Milaza hoe andramo "Adikao amin'ny sarin'izy ireo, ny hatsaran-tarehy sy ny fahasarotan'ny vehivavy", maneho amin'ny sary hosodoko ny haren'ny fitafiany sy ny kojakojany, izy rehetra dia nomena fijery feno hafahafa, tsy afa-bela, ary nifantoka tamin'ny fomba fiteny tsy fantatra avokoa izy rehetra. Faiza Maghni monina sy miasa ao Paris nandritra ny folo taona mahery.
Teraka tany Oran, Algeria aho, ary mipetraka any Paris aho izao. Io eclecticism io dia misy fiantraikany amin'ny hatsarako, indrindra ny kolontsaina sy ny fomban-drazako, tanàna mediteraneana manankarena izay hita taratra amin'ny fitaoman'ireo sivilizasiôna maro nobodoin'izy ireo: Espaniôla, jiosy, arabo, andalusia, Ottoman ary frantsay. Izany rehetra izany dia namela ny toerany, na amin'ny maritrano, na mozika na fomba fiaina amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny asako dia manandrana mampita karazana romantisme iray nentanin'ny tononkalo Arabo sy Persiana aho, naka ny aingam-panahiko tamin'ny fitafiana sy taovolo an'ny bitika taloha izay hitako feno fahaiza-mandanjalanja sy antonony. Manintona ahy ihany koa ny dikany an'ohatra hita amin'ny firavaka ara-poko ary namerina namorona an'ity sary ity tamin'ny sary hosodoko aho, toy ireo vehivavy zirafy turtleneck ao Birmania izay sady mariky ny hatsarana sy habibiana an-tery.
Ny sary hosodoko dia faniriana tsy nahatsiaro tena sy tsy takatry ny saina efa ela intsony izay lasa voajanahary amin'ny ho avy. Mahaliana an'i persiana miniature, kaligrafy arabo, koa avy amin'ny zavakanto foko ary ny sary hosodoko ankehitriny, izay aingam-panahy avy amin'ny asany ary mamorona izao rehetra izao. Faiza dia manandrana mandika amin'ny alàlan'ny sariny, ny hatsaran-tarehy sy ny fahasarotan'ny vehivavy amin'ny sary hosodoko, izay ilazan'izy ireo an'io harenan'ny fitafiana ary fanehoana manaitra ny jereo. Mampifangaro an'izao tontolo izao ny sariny ny fifantohany amin'ny fanehoan-kevitra tsy fantatra.
Efa hatramin'ny fahazazako no nanao sary. Ny raiko, mpanao hosodoko tsy miankina, dia nanome ahy sary hoso-doko sy sary. Nijery azy niasa aho, tiako ny fofon'ny ranomainty sy taratasy, nisotro izy tamina toetra tony sy nifantoka. Nandritra izany fotoana izany dia nampianatra ahy ny reniko ho tia mamaky teny. Mpampianatra frantsay izy ary nanana tranomboky lehibe manokana, indrindra ny literatiora frantsay. Amin'ny maha-toetra mandini-tena ahy manokana izany dia nanampy ahy bebe kokoa hampivelatra ny fitiavako zavakanto. Tamin'izaho zatovo dia liana tamin'ny lamaody koa aho. Nanintona vehivavy manao akanjo aho rehefa nanonofy, rehefa nanonofinofy ny ho tonga mpamorona lamaody any Paris toa an'i Yves Saint Laurent, raha izy avy tany Oran.
Ao amin'ny sary hosodoko, ny firavaka dia maneho fihetsika izay matotra indraindray, indraindray henjana, indraindray tsy miraharaha, ary amin'ny hafa dia misy fahamendrehana iray. Ny fanitarana dia matetika noforonina hanehoana ny tanjako manokana. Indraindray ilay akanjo dia mety ho fiadiana manaitra ary indraindray karazana manafina jiro sy efijery izay maneho azy.
Ao amin'ny faribolana akaiky ahy indrindra, ny sary hoso-doko dia hita ho fialamboly kokoa noho ny asa aman-draharaha. Nanomboka nandray ahy tamim-pahamatorana izy ireo taty aoriana, rehefa nanomboka nampiharihary ny asako aho. Raha tsy nanapa-kevitra ny handeha hipetraka any Paris miaraka amin'ny vady aman-janako aho, dia heveriko fa tsy ho tonga mpanao hosodoko mihitsy aho. Betsaka ny adim-pianakaviana sy ny fanerena ara-tsosialy ao amin'ny firenena tiako, nefa izay miha-conservative hatrany, dia tsy ahafahana mitombo ara-javakanto ao anatin'ny fetra tsy misy antony, izay misy adidy apetraka amin'ny vehivavy.
Rehefa nahita ny sary hosodoko voalohany an'ny Baya tanora (Mahieddine) aho, ilay niara-belona tamin'i Picasso, izay nandoko ny vehivavy ho tsy misy dikany, tsy dia tia ary afaka. Tsapako avy hatrany fa misy ifandraisany amin'ny tanjaka sy ny fahalalahana tsy manam-paharoa amin'ny asany. Tsapako izao fa io no nanome aingam-panahy ahy hoso-doko tamin'ny fotoana farany. Ity misy galerin'ny sary tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fijerena manaitra ny sarin'i Faiza Maghni
Ny fomba manokana amin'ny "nomerika" amin'ny hosodoko menaka Jeremy Mann